I-Really Nice Apartment kaLil BUB - WEST - I-Airbnb
I-Really Nice Apartment kaLil BUB - WEST
400 okushiwo abanye
Kuzwakala kukuhle kakhulu ukuthi kungaba yiqiniso, kodwa ... ungacindezelwa kanzima ukuthola indawo engcono ongahlala kuyo ngezindleko eziphindwe kabili, noma yikuphi - vele ufunde izibuyekezo zethu.
Imishini emisha yekhwalithi ephezulu, iphansi le-oki elimhlophe, izikhawu ze-quartz, ama-top-top finishes, itiye elimnandi, omatilasi abanethezeke ngokwedlulele, i-wifi, i-Netflix, i-HBO, i-Hulu, i-Hulu Live TV, iziphuzo zamahhala ezingu-$30 ku-Hopscotch Coffee kanye ne-Cardinal Spirits (ibanga lokuhamba ), kanye nesikhwama samahhala esingu-6 ounce sika-Lil BUB sika-Lil Beans - inhlanganisela yekhofi ye-whole-bean eyenzelwe thina. Hhayi lokho kuphela, kodwa u-10% wokubhukha kwakho uzuzisa izilwane ezifuywayo ezikhethekile ezingenakhaya.
Kuyifulethi eliphethwe umndeni, elakhiwe ngokukhethekile futhi elakhelwe ukuhlinzeka abantu abavakashela idolobha lethu elihle ngendawo yokuhlala ekahle. Sizimisele ukwakha indawo ehlanzekile, esesitayeleni, yesimanje, futhi enethezekile ngokunaka kahle kakhulu imininingwane ehlanganisa amaphansi okhuni oluqinile olumhlophe lwe-oki, izindawo zokubala zequartz, izinto zikagesi eziwuhlobo olusha sha lonke, ama-dimmers akhanyayo kulo lonke, izitolo neziteshi zokushaja eduze kombhede ngamunye, I-Murphy Bed eyakhiwe ngokwezifiso eguqulela esofeni lesimanje laphakathi nekhulunyaka, igumbi lokulala elizimele elinombhede olingana nenkosi, i-TV yesikrini esiyisicaba esine-Netflix, i-Hulu, nezinye izinsiza zokusakaza, kanye nobuciko bendawo obulenga ezindongeni. Siphinde futhi sinikeze izivakashi zethu uhlobo lwetiye olukhethekile, kanye nobhontshisi wekhofi kanye neziphuzo zekhofi ezimbili zamahhala ezivela kwa-Hopscotch Coffee, indawo yokosa yasendaweni etholakala endaweni yokuhamba ibanga lekhilomitha kuphela ukusuka efulethini, kanye namakhekhe amabili amahhala avela ku-Cardinal Spirits. , indawo yokudlela yasendaweni ezansi nomgwaqo osuka eHopscotch. Ikhishi selilungele ukusetshenziswa futhi, nakho konke okudingayo ukuze uziphekele ukudla kwakho, okuhlanganisa izitsha, okokusikisela, amabhodwe namapani, namafutha okupheka imbala. Siphinde sihlinzeke ngamathawula amasha nezindwangu zokugeza, ishampoo, i-conditioner, nensipho yomzimba.
Sinezindlu ezimbili ezihlangene ezitholakalayo ukuze ziqashwe. Lolu hlu olwe-West Apartment, elicishe lifane ne-East Apartment, ngaphandle kokuthi ngaphezu kwendawo yokuhlala ene-Murphy Bed nekhishi, kukhona ne-Master Bedroom enombhede olingana nenkosi ongavalwa ngaphandle kwendlu. lonke efulethini. Uma leli fulethi libhukhiwe, sicela uhlole okungenani i-Really Nice Apartment ka-Lil BUB - EAST ukuze utholakale.
Uma ufuna okuthile okushibhile kancane, i-East Apartment yethu ine-"Relaxation Loft" ehlukile kakhulu esikhundleni segumbi lokulala elikhulu. Iyigumbi elingu-4' ubude (kunjalo, liyi-4' kuphela ubude!) elikleliswe ngokhaphethi owubukhazikhazi kanye nemicamelo yokujikijela. Inombhede wenkundla yosayizi wendlovukazi, ukukhanya kwemizwa, kanye ne-TV yesikrini esibanzi. Igumbi lifinyeleleka kalula ngesitebhisi futhi lingavalwa ngomnyango we-accordion wangokwezifiso. Ilungele ukubuka amamuvi nomndeni, noma njengegumbi elipholile lezingane zokuhlanganyela nokuhlala kulo.
Ifulethi litholakala ngenhla kwe-Russian Recording, isitudiyo esisebenza ngokugcwele se-analog kanye ne-digital recording esikhiqize ama-albhamu angaphezu kuka-1000 kusukela ngo-2003. Amafulethi akhiwe ukuze abe umsindo ongasodwa esitudiyo ukuvimbela umsindo ukuthi ungophi emakamelweni. Uma ungathanda ukuvakashela isitudiyo, sicela usazise futhi singajabula ukukubonisa uma ingekho iseshini ebhukhiwe ngesikhathi uhlala.
Ungase uqaphele ukuthi obunye ubuciko ezindongeni buhlanganisa ikati elimangalisayo elimangalisayo. Ikati lethu lelo, igama lakhe ngu-Lil BUB (yingakho igama lefulethi), futhi ungomunye wamakati adume kakhulu (nathandwa kakhulu) emhlabeni. Ngaphezu kokuba umbhali oshicilelwe, umsingathi wohlelo lwezingxoxo, isihlabani se-TV nesamamuvi, kanye neciko elihamba phambili eshadini le-Billboard, i-BUB iqoqe ngaphezu kwengxenye yesigidi samadola ngezilwane ezifuywayo ezingenakhaya emhlabeni wonke. U-10% wenani elibhukhiwe uzohlomula I-Big FUND ka-Lil BUB ye-ASPCA, isikhwama sikazwelonke sokuqala sezilwane ezifuywayo ezinezidingo ezikhethekile. Uma ungathanda ukufunda okwengeziwe nge-BUB, ungafunda ngendaba yakhe emangalisayo nekhuthazayo ngokungena ku-Lil BUB futhi uvakashele ikhasi elithi Mayelana kuwebhusayithi yethu ( angikwazi ukuthumela izixhumanisi zangaphandle encazelweni!).
4.89 · 400 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-400